Bulsha weynta iyo waxgaradka G/sanaag oo ka hadlay Dirirta Duleedka Buuhoodle – SBC
Bulsha weynta iyo waxgaradka G/sanaag oo ka hadlay Dirirta Duleedka Buuhoodle
Iyadoo Maalmihii ugu dambeeyay ay isa soo tarayeen colaadaha dagaal ee ka jira qeybo ka mid ah gobolkaasi Ceyn ayaa waxaa qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka Sanaag wada qaateen kulamo ay kaga arinsanayaan dagaaladaasi.
Qeybaha Bulshada, Wagaradka iyo odayaasha iyo ururada ayaa kulamo ay ku qaateen Baran waxa ay kaga muujiyeen wal wal iyo walaac xoogleh colaadahan isa soo taraya ee ka jira gobolka Ceyn.
waxa ay sidoo kale ka digeen dhamaan dadkii halkaasi ku shiray in dagaalada iyo colaadaha halkaasi ka jira ay isu bedelaan Arimo Isir ah, iyagoona u diray Fariin maamulka Hargeysa ee uu horkacayo Siilaanyo iyagoona u sheegay in uu ka digtoonaado dhibaateynta shacabka iyo gardaraysiga uu marwalbo sameynayo.
Sikastaba ha ahaatee waxa ay ka soo saareen Baaq arimaha dagaalada duulaanka ku ah umada Reer Cayn ay ku wado soomaaliland iyagoona u diray maamulka Puntland iyo Dowlada Dhexe ee Soomaaliya, taas oo ay ku sheegeen in Puntland hadalka ay ka hadleyso oo qura aysan ku ekaane ay ku darto ficil.
Inkastoo Xaalka gobihii lagu dagaalamay ee gobolkaasi Cayn ay maanta degentahay ayaa hadana waxay aheyd Maalin nimadii shalay markii Dagaal xoogani uu halkaasi ka dhacay ayna gacansareynta ku yeesheen Dadka deegaanka ee lagu soo duulay